Ogaden News Agency (ONA) – Yuhuuda oo Markale Dib Usoo Celisay Xiisadii Masjidka Al-Aqsa.
Yuhuuda oo Markale Dib Usoo Celisay Xiisadii Masjidka Al-Aqsa.
Posted by ONA Admin	/ August 31, 2017
Xukuumada Israel ayaa dib u bilowday faro-gelintii iyo daan-daansigii ay ku heysay Masjid Al Aqsa ee ku yaal magaalada Qudus. Raysalwasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa qaaday xayiraad horey loo saaray in xildhibaanada Israel ay gudaha u geli karaan Masaajidka barakeysan ee Al Aqsa.
Sanadkii 2015 ayey xukuumada Israel xayiraad kusoo rogtay Xildhibaanada iyo Siyaasiyinta Yuhuuda ah ee gudaha u galaya xarunta Masjidka Al Aqsa, kadib markii ay rabshado badan ka dhasheen daan daansiga Yuhuuda ay ku heyso masaajidka Al Aqsa.
Xubno kamid ah Xisbi xaakimka maamulka Yuhuuda ee Likud ayaa shalay gudaha u galay Masaajidka Al Aqsa iyagoo ay wehliyaan ciidamo si aad ah u hubeysan, waxayna sheegeen in dhawaan loo fasixi doono Yuhuuda iyo siyaasiyiintooda inay gudaha u galaan dhulka uu ku fadhiyo Masjid Al Aqsa oo ay Yuhuda ku doodo in goobtaasi uu horey ugu ooli jiray Macbadkoodii ugu weynaa.
Netanyahu ayaa lagu yaqaan mar walba oo ay soo wajahado xiisado siyaasadeed oo ka dhex taagan maamulka Yuhuuda, isku daya inuu isagana cadaadis saaro Falastiiniyiinta si uu taageero uga helo shacabka Yuhuuda ee taageera xisbigiisa xagjirka ah ee Likuud.
Yuhuuda ayaa hamigooda ugu weyn uu yahay inay gebi ahaan la wareegaan goobta uu ku yaal Masjidka Al Aqsa si ay halkaasi markale uga dhisaan Macbadkoodii ay sheegaan inay ka burburiyeen Boqortooyadii Romaanka, si ay halkaasi ugu soo dhaweeyaan “Masiixiga” ay sugayaan oo ay Diinta Islaamka sheegto inuu yahay Dajaal.
Maamulka Falastiin ayaa cambaareeyey booqashadii shalay xildhibaanada Yuhuuda ah ku tageen masjidka Al Aqsa oo lagu soo beegay xili lagu jiro bisha Xajka oo ay muslimiinta isu diyaarinayaan ciida, tilaabadaasi oo ay ku sheegeen inay qeyb ka tahay daan daansiga cusub iyo qorshaha dheer oo Yuhuuda doonayaan inay kula wareegaan dhulkaasi uu Masjidka barakeysan ee Al Aqsa ku yaal.
Bishii lasoo dhaafay July ayey Falastiiniyiinta dhigeen mudaharaadyo socday dhowr todobaad, iyagoo kasoo horjeeday in isbaarooyin dadka lagu baaro ay Israel dhigatay wadooyinka laga galo Masjidka Al Aqsa, xukuumadii Yuhuuda ayaa markii danbe qaaday isbaaroyinkaasi kadib markii cadaadis uga yimid beesha Caalamka.